Dhagayso:- Soomaaliland oo Sheegtay inay Soomaaliya faragalin ka waddo dhulka ay maamulaan. | Puntland Vision
Dhagayso:- Soomaaliland oo Sheegtay inay Soomaaliya faragalin ka waddo dhulka ay maamulaan.
16 Luuliyo (Puntland Vision)—Qaybo kamid ah gobolka Sanaag ayaa laga waddaa diiwaan galinta ciidamo kamid ah noqonaya ciidamada dawlada federalka Soomaaliya kuwaas oo laga ururinayo deegaanada Soomaaliyeed si tababar loogu Furo.
Askartan oo mudooyinkii danbe diiwaan galintoodu ay ka jirtay qaybo kamid ah Sanaag Bari ayaa loo waday magaalada Muqdisho si ay qayb uga noqdaan ciidamada Soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqonaya isku dhafka ciidamada Soomaaliya ee loo carbinayo ciidamo qaran.
Maamulka Soomaaliland ayaa ka hadlay isku dhafka ciidamadaasi waxaana ay sheegeen inay dawlada federalka Soomaaliya ay faro galin ka waddo dhulka Soomaaliland.
Axmed Maxamed Nuur Wasiir ku xigeenka wasaarada Ganasiga iyo maalgashiga Soomaaliland ayaa xili uu warbaahinta kula hadlayey Xarunta Wasaaradu ay kuleedahay magaalada Hargaysa wuxuu sheegay inay ugu baaqayaan dawlada federalka inay joojiso qoraalka Askartaasi.
Arintan ayaa kusoo aadaysa Xili dhawaan lagu waddo magaalada Garowe inuu kasoo dego madaxwaynaha dawlada federalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Wafdi uu hogaaminayo iyadoo sidoo kale xubno kamid ah golaha wasiirkada Soomaaliya ay ku suganyihiin deegaanada Puntland.
Hooska dhagayso Codka.